Baro sida loo ganacsado sanadka 2021 oo ka faa'iidayso Daily Signals Forex Free 🥇
E:[emailka waa la ilaaliyay]
Quudinta Wararka FX
PDF Ganacsi Forex
Boorsooyinka ugu fiican ee Cryptocurrency
Dullaaliinta Islaamiga ah ee Islaamka
Suuqyada Buluugga ah
78.77% xisaabaadka tafaariiqda CFD ayaa lumiya lacag
Dahabka (XAUUSD) Dhaqdhaqaaqa Hoos u Dhaca, Waji -diidnimada Heerka $ 1,760
Jimco, Oktoobar 1, 2021
Heerarka Iska-caabbinta Muhiimka ah: $ 1,900, $ 1,950, $ 2000 Heerarka Taageeradda muhiimka ah: $ 1,750, $ 1, 700, $ 1,650 Dahab (XAUUSD) Isbeddel Muddo Dheer ah: RangingGold (XAUUSD) ayaa dhinac dhinac uga dhaqaaqay hoos-iska-caabbinta dusha sare ee $ 1,830. Dhaqdhaqaaqa dhinac dhinac ah ayaa socday tan iyo bishii Luuliyo. 2 -dii Sebtembar, iibsadayaashu waxay dib ugu celiyeen iska -caabbinta dusha sare $ 1,830 waana la is -hortaagay. Suuqa ayaa soo galay […]
Doolarku wuxuu xoojinayaa guulaha, u fiirsigu wuxuu u wareegayaa Euro
Khamiista, Sebtember 30, 2021
Iyada oo Dollar-ku qodanayo kororka wax-soo-saarka toddobaadkan, dareenka iibinta ayaa u wareegay Euro, gaar ahaan suuqyada isgoysyada. Dhanka kale, dareenka khatarta sii kordhaya ayaa caawinaya lacagaha badeecadaha iyo Sterling, iyadoo doolarka Australia uu hormuud u yahay baakadka. Jawiga halista ah ee deggan, lacagta yen iyo fransiiska Swiss caadi ahaan waa daciif. Heerka shaqo la’aanta ee ka jirta Eurozone […]
AUDUSD waxay sii wadaysaa inay kor u kacdo iyada oo la eegayo Muuqaalka Suuqa ee xun
Falanqaynta Qiimaha AUDUSD-Sebtember 30 Intii lagu guda jiray fadhigii Ameerika, AUDUSD waxay heshay jahawareer waxayna kor u kacday 0.7257, oo ah maalin cusub oo sare oo ay taageerto hoos u dhac ballaaran oo doolarka Mareykanka ah. DXY wuxuu hoos u dhacay 0.20 boqolkiiba, isagoo calaamad u ah markii ugu horreysay ee uu hoos u dhaco kadib afar maalmood oo guulo ah. In kasta oo dammaanadda Mareykanka ee deggan ay soo baxdo oo aan sinnayn […]
Dogecoin (DOGE) wuxuu kor ugu kacayaa Taageeradda $ 0.20, Hoos u dhac ku yimid $ 0.16 waa macquul
Heerarka Ka-hortagga Muhiimka ah: $ 0.45, $ 0.46, $ 0.47 Heerarka Taageeraha Muhiimka ah: $ 0.25, $ 0.20, $ 0.15 DOGE/USD Isbeddelka Muddada-Dheer: Qiimaha BearishDogecoin (DOGE) ayaa hoos ugu dhacay $ 0.20 ka dib markii uu jabiyey hoos-u-dhicii hore ee $ 0.21. Maanta, crypto ayaa is-beddelaya $ 0.20 taageero. Kahor qiimihii dhowaan dhacay, qiimaha DOGE wuxuu ka hooseeyay $ 0.21 taageero, wuxuu dib u tijaabiyey ka hor inta uusan dib u bilaabin hoos u dhaca. Waqtigan xaadirka ah, […]
Lacagta Dijital ah waxay faa'iido u tahay Dhaqaalaha Adduunka: Warbixinta BIS
Warbixin cusub oo ay daabaceen Bangiga Degsiimooyinka Caalamiga ah (BIS) iyo koox bangiyo dhexe ah ayaa sheegaya in lacagta dhijitaalka ahi ay kobcin karto degsiimooyin degdeg ah iyo beddelaad raqiis ah. Qiyaastii laba toddobaad ka hor, madaxa Innovation Hub ee Baanka Degsiimooyinka Caalamiga ah (BIS), Benoît Cœuré, wuxuu caddeeyay in bangiyada dhexe ay tahay inay qaataan waajibaadka iyo […]
Shaxda maalinlaha ah
USDJPY Rally way sii socotaa iyada oo heleysa Xawli badan oo Bullish ah
Falanqaynta USDJPY - Qiimuhu wuxuu kusii socdaa inuu sare u kaco iyadoo Hawlgalku kordhayo isu -soo -baxga USDJPY iyadoo sii xoogaysigu sii kordhayo. Iibsadayaashu waxay heleen booskan ka dib markii shumac xoog lihi ku habsaday meel u dhow heerka muhiimka ah ee 109.100. Dibiyada ayaa markaa kordhisay cadaadiska, suuquna wuxuu sii wadaa inuu kor u kaco. Qiimaha ayaa, si kastaba ha ahaatee, lagu wadaa inuu gaaro […]
Warshadaha Macdanta Bitcoin ee Maraykanka ayaa ka Faa'iidaysan kara Xayiraaddii Shiinaha ee Dhawaan: Duqa Magaalada Florida
Duqa magaalada Miami, Florida -Francis Suarez -wuxuu aaminsan yahay in tallaabada Bitcoin (BTC) iyo cryptocurrency ee dowladda Shiinaha ay fursad weyn u tahay suuqa Mareykanka inuu ka faa’iideysto. Duqa magaalada, oo hadda ka shaqeeya dhisidda magaaladiisa xarun Bitcoin, ayaa u sheegay Bloomberg in: “Meesha isbeddelka hadda waa. Waxay abuurtaa cajiib ah […]
CYCE-Calaamadda Beddelka Ciyaarta oo sahlaysa Saamaynta Caalamka
Taabashada saldhigga CYCE, oo ah astaan ​​ERC-20 oo si weyn u beddeli doonta sida aan uga fikirno cryptocurrency. Waa hindisaha ugu horreeya ee xannibaadda ganacsiga ee Turkiga ee Crypto Carbon Energy, laakiin waxay ku jirtaa meel sare. Iyada oo ujeedadu tahay in lala dagaallamo Isbedelka Cimilada Adduunka, CYCE waxay rabtaa inay wax ka beddesho isbeddelka tamarta la cusboonaysiin karo ee […]
Uniswap (UNIUSD) Qiimaha: Dhaqdhaqaaqa Bullish ayaa kiciya Heerka $ 17, Waxaa laga yaabaa inuu kusii socdo $ 30
Falanqaynta Qiimaha Uniswap - Sebtembar 30 Qiimaha ayaa laga yaabaa inuu galo heerka iska caabbinta ee $ 26 wuxuuna u kici karaa heerarka iska caabbinta ee $ 30 iyo $ 37. Awood la'aanta in ay dhex gasho heerka iska caabbinta ee $ 26 ee dibiyadu waxay ku dambayn kartaa suuqyo kala duwan ama dib u noqosho xagga heerarka taageerada ah $ 21, $ 17 iyo $ 14. Suuqa UNI/USD […]
Kaarka Lacagta Sare
Dib -u -eegista Kaarka Lacagta Sare: Sida Loogu hubiyo Xaddiga AdvCash
Cashuur Sare, oo loo soo gaabiyo AdvCash, waa urur lacag -bixin oo dhammaystiran oo la aasaasay 2014. Guddiga Adeegyada Maaliyadeed ee Belize ayaa oggolaaday madalkan xawaaladaha. Intaa waxaa sii dheer, nidaamkani wuxuu sidoo kale xiriir la leeyahay Wave Crest Holdings Limited, oo caan ku ah bulshada kaarka deynta ee Bitcoin. Madalkani wuxuu siiyaa adeeg muhiim u ah qof kasta oo la xiriira dalwaddii […]
Calaamadaha Forex Telegram
Xafiiska 1/2373, Heerka G, Guriga Quantum, 75 Abate Rigord Street, Ta 'Xbiex, XBX 1120, Malta
Lambarka Shirkadda Diiwaangashan: 11746374
Hel Calaamadaha VIPU dhig $ 50 si aad u hesho VIP Bilaash ah Calaamadaha Forex ee 1 Sannad! Ka ganacsiga MT4 oo leh Leverage ilaa 1: 500!